JAMHUURIYADDA DOMINIKAN - Taariikh ahaan, geeddi-socodka macdanta ee heerarka soo-kabashada oo liita waxay keeneen dabo-gallo leh tiro aad u tiro badan oo ah wax dib loo soo celin karo. Soo saarida maaddadan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo qolal.
Waxaa jira dhowr arrimood oo cudurdaar u leh soo-saarista iyo dib-u-habeynta qoryaha
Dabada waxay u baahan tahay ilo yar markii la barbar dhigo macdanta caadiga ah. Tusaale ahaan, wadiiqadu waxay - hal talaabo - soo saari kartaa oo ku qaadi kartaa alaabta warshad wax lagu farsameeyo oo ku taal meel u jirta kow iyo labaatan kiiloo mitir. Tani waxa ay yaraynaysaa kharashka la xiriira qalabka caasimadda, shaqada, shidaal, iyo dayactirka.
Ka baaraandegidda xargaha ayaa u oggolaaneysa soosaar dheeraad ah iyada oo aan la kordhinin raad-raac miino iyo iyada oo aan loo baahnayn oggolaansho dheeraad ah oo dhulka ah.
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Dominican Republic, 105km waqooyiga Santo Domingo. Mulkiilaha mashruuca waa Panterra Gold / Envirogold oo reer Australia ah. Dahabka iyo qalinka waxaa laga soo saaray hawlihii macdanta ee caadiga ahaa intii u dhaxeysay sanadihii 1992 iyo 1999. Dib u soo kabashadii asalka ahayd ee macdanta waxay ahayd mid liidata (<30%) tiro aad u badan oo macdan ahna waxaa la dhigay biyo xireenka Biyo xireenka ayaa leh qiyaastii 5,137 milyan oo metrik tonnes oo macdan ah, oo lagu qiimeeyay 3.8 g / t dahab ah iyo 38.6 g / t oo qalin ah.
Sannadkii 2012, Envirogold wuxuu iibsaday mid Ellicott 370 Dragon® dredge si looga soo saaro waranka daboolka lagana jaro warshadooda.
Qulqulka ayaa loo isticmaalay in lagu soo saaro walxaha qotoda dheer ilaa 8m oo ay ku ridaan sidii masaafada u dhaxaysa 500m iyo 800m iyo sare u qaadka xNUMXm. Slurry waxaa lagu ridayaa iyadoo la adeegsanayo tuubbo 11-inji ah HDPE. Dhergeedu wuxuu abuuraa oo matoorraa isku darka oo leh cufnaanta 10%. Xabbaduhu waxay leeyihiin cufnaan Gaar ah oo 28 ah iyo cufnaanta qoyan ee 2.69t / m1.71.
Si loo kordhiyo awooda wax soo saarka iyo in la bixiyo dabacsanaan badan howsha, Envirogold wuxuu iibsaday labaad 370 dredge kana yimid Ellicott® in 2013.
Qulqulayayaashu waxay hadda shaqeeyaan si ay u bixiyaan 24 saac halkii saac oo lagu quudiyo, iyadoo lagu beddelayo dredges si loo gaaro wax soo saarka, oo ay la socdaan shaqaale hal (1) ah oo ka kala shaqeeya halkii dredge iyo laba (2) caawiye halkii wareeg kasta.
Si si wanaagsan loogu maareeyo alaabada iyo biyaha howsha qashin-qubka, biyo-xidheenka ayaa loo qaybiyay qaybo-hoosaadyo yar-yar oo loo yaqaan barkado-biyoodyo. Mar haddii qayb ka mid ah biyo xidheenka la jeexjeexo, maran ayaa la abuuray waxaa loo isticmaalaa in dib loogu soo celiyo maryaha la warshadeeyay ee warshadda, sidaas awgeedna lagu hayo raad-biyoodka biyo-xidheenka. Hawlgalka qashin-qubka ayaa u adeegsanaya biyaha jira ee ku yaal biyo-xireenka. Biyaha la karkaray waxaa dib loogula wareegaa balli qallalay markaa uma baahna biyo dheeri ah.
Saddexda bilood ee ugu horreeya ee 2013, qulqulka ugu horreeya ayaa soosaaray oo soo duubay ku dhowaad 80,000 m3 ee dabadheer warshaddii ka shaqeysa.
The Taxanaha Ellicott 370 milmaya caadiga ah waa ku milmaya naaftada-powered nuugid magaabay wiil qaba 12 "x10" bamka ah iyo 440 HP wadarta awoodda lagu rakibay. Waa wax aad u awood badan, la isku halleyn karo oo la qaadan karo oo ku habboon nooca noocan ah. Qaybta koowaad waxaa la siiyay qalab wax lagu gooyo oo caadi ah, halka qaybta labaadna ay ku jirto mashiinka wax lagu gooyo ee baaldiga lagu xiro.
Iyada oo loo marayo heshiis hawlgal gaar ah, farsamayaqaannada Adeegga Goobta ee Ellicott waxay ku hawlgaleen labada meelood muddadii 3 bilood ee 2014. Adeeggan wuxuu u oggolaaday macmiilka inuu sare u qaado wax soosaarka qulqulka iyo ku tababaro hawl wadeenadiisa habsami udhaafidda qulqulka.
Suuqyada iyo isbeddelada farsamada ayaa ka dhiga dib-u-habeynta eeciyaha wax badan oo soo jiidasho leh. Iyada oo ay ugu wacan tahay awooddeeda si ay si la isku halleyn karo uga soo saarto alaabo fara badan oo ay u rarto iyada oo aan loo baahnayn in la labanlaabmo, qulqulatadu waa meel ku habboon mashruucyadan. Iyada oo in ka badan sannadihii 125 sano ee khibradda naqshadaynta iyo soo saarista tayada ugu sareysa, dredges ugu awoodda badan oo la isku halleyn karo, Ellicott Dredges ayaa ah xalka saxda ah!
Ku Bilow Mashruucaaga Qodista Taleex ee Ellicott